Hip Hop uye Mukurwisa Chivi — Trip LEE
Hip Hop uye Mukurwisa Chivi
Ichi chikamu Mubvunzurudzo Ndakaita pamwe vachishuva Mwari. Ndichaenda kuposita wemigove sezvo dg anoisa kunovaparadza
Hip Hop uye Mukurwisa Chivi kubva vachishuva Mwari pamusoro Vimeo.
Michelle • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:52 ndiri • pindura
Ndinokutendai nokuti inokurudzira vhidhiyo iyi. Saka kusimba chaizvo ushumiri hwako uye ushumiri nevamwe semi vachishandisa matarenda avo raakapiwa naMwari kuti kubwinya kwake. Kukunyengetererai uye mhuri yako!
W. Lynn Oriente • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:53 ndiri • pindura
chii?! hapana munhu yakati asi? regai ingotaurai kuti ndinomuda zvino. An zvinoshamisa munhu waMwari.